मोटर बाटोले नछोएको जग्गा धितो राखेर ऋण पाइने ? – Taja Khawar
मोटर बाटोले नछोएको जग्गा धितो राखेर ऋण पाइने ?
प्रकाशित मिति: शनिबार, भाद्र १२, २०७८ समय: १५:४९:४३
मोटर बाटोले नछोएको जग्गा धितो राखेर ऋण पाइने !
August 28, 2021SanamLeave A CommentOn मोटर बाटोले नछोएको जग्गा धितो राखेर ऋण पाइने !
भदौ, काठमाडौं । अब मोटर बाटो नभएको जग्गासमेत धितोमा राखेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन पाइने भएको छ । यसरी लिइने ऋणको सीमा २० लाख रुपैयाँसम्म राखिएको छ । नेपाल राष्‍ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको मौद्रिक नीति कार्यान्वयनका लागि एकीकृत निर्देशन जारी गर्दै यस्तो ऋणको सीमा २० लाख रुपैयाँ तोकेको हो ।जग्गा धितोमा ऋणी लगानी गर्दा मोटरबाटो नभएका जग्गाहरु बैंकको प्राथमिकतामा पर्दैन थिए । १ करोडसम्मको कृषि, हस्तकला तथा सीपमूलक व्यावसाय एवम् उद्यम व्यवसाय (आयात सम्बन्धी व्यवसाय बाहेक) सञ्‍चालनका लागि कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा २ प्रतिशतसम्म मात्र थप गरी ऋणको ब्याज तोक्नु पर्ने समेत राष्‍ट्र बैंकले बताएको छ ।यस किसिमका ऋण माग भइ आए विलम्ब नगर्न समेत राष्ट्र बैंकले क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई निर्देशन दिएको छ ।‘प्रत्येक शाखाले यसप्रकारको कर्जासम्बन्धी निवेदन प्राप्त भएको सात कार्य दिनभित्र स्वीकृत गर्नुपर्ने र स्वीकृत हुन नसक्ने भए सोको स्पष्‍ट कारण समेत उल्लेख गरी सम्बन्धित ग्राहकलाई लिखित रुपमा दिनुपर्ने छ’ निर्देशनमा भनिएको छ ।****** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला ******
रोल्पा को दुर दराजमा जन्मिएका खबपु एउटा कमेडियन मात्र नभई एउटा कुशल गायक तथा कल्चरल डान्स मास्टर पनि हुन। “प्रथम कमेडि चेम्पियन शो” बाट लाखौ नेपालीहरुका मुटुका ढुकढुकी बन्न सफल कमेडियन खबपु चन्चल मगर ले के के गर्थे होला भन्ने थुप्रै दर्शक श्रोताहरुका कौतुहलता हुनु स्वभाबिक हो तर अर्गानिक कमेडियनको ट्याग पाएका खबपु यतिबेला यस्तो अवस्थामा छन् हेर्नुहोस
जब कर तिर्न आँचल कर कार्यलय पुगिन्…
नेपाली चलचित्र तथा म्यूजिक भिडियोमा काम गर्ने कलाकारहरुले लाखौं पारिश्रमिक लिएको चर्चा हुने गर्दछ । तर, कलाकारहरुले कर तिरेको खबर भने सार्वजनिक हुँदैन । यसैले पनि यति धेरै पारिश्रमिक लिने कलाकारहरुले कर किन तिर्दैनन् भन्ने प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।
तर, नायिका आँचल शर्मा भने लाजिम्पाटस्थित आन्तरिक राजश्व विभागको कार्यलयमा कर वुझाउन पुगेको भिडियो अहिले चर्चामा छ । कर कार्यलयका कर्मचारीले भिडियो खिचेर सामाजिक संजालमा पोष्ट गरेपछि अहिले यो भिडियोको बिषयमा चर्चा परिचर्चा भएको छ ।
आँचललाई कर कार्यलयका कर्मचारीले अफिस कस्तो लाग्यो भनेर सोधेका छन् । जसमा आँचलले सेवा निक्कै नै राम्रो लागेको भनेर प्रतिक्रिया दिएकी छिन् । आँचलले नमस्कार गर्दै कर कार्यलय आउन पाउँदा खुशी लागेको भन्दै कर्मचारीसँग प्रशन्न मुद्रामा कुरा गरेकी छिन् ।
यो भिडियोलाई अर्थ मन्त्रालयका उप–सचिव कर्ण तिमिल्सिनाले ट्विटरबाट सार्वजनिक गरेपछि विभिन्न प्रतिक्रिया आएका छन् । उनले ‘एकजना नयाँ करदाता थपिएको’ भन्दै क्याप्सन लेखेका छन् । अधिकांश प्रयोगकर्ताले आम जनतालाई भने कर तिर्न जाँदा पनि सास्ती भोग्नु परेको तर नेता, कलाकारलाई भने न्यानो आतिथ्यता मिल्ने गरेको भन्दै सबैलाई एउटै व्यवहार गर्न आग्रह गरेका छन् ।
नेपाली चलचित्रका कलाकारले लाखौंंं पारिश्रमिक वुझेपनि कर तिर्न आनाकानी गरिरहेको समयमा कर कार्यलय पुगेकी आँचललाई देखेर कर्मचारी नै आश्चर्यमा पर्नु स्वभाविक नै हो ।
Last Updated on: August 28th, 2021 at 3:49 pm